महिला प्रहरीले गराईन स्तनपान, दुनियाँका आँखा रसायो ! « Onlinetvnepal.com
महिला प्रहरीले गराईन स्तनपान, दुनियाँका आँखा रसायो !
Published :6November, 2018 8:31 pm
तस्विर पोस्ट भएलगत्तै भाइरल हुन पुग्यो र सिलिसटेले देखाएको ममता समाचारका हेडलाइन बन्न पुगेको थियो। बुइनोस एरिस प्रान्तका सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टियान रिटोन्डोले सिलिसटेलार्इ भेटेर उनी सर्जेन्ट पदमा बढुवा भएको जानकारी दिएका थिए। रिटोन्डोलेले सिलिसटेले देखाएको ममताको कदर गरेको र त्यस्तै अर्जेन्टिनालार्इ यस्तै प्रहरी प्रशासन चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्
आजको तपाइको दिन कसरी बित्नेछ ? हेर्नुहोस् आजको तपाइको दिनभरिको भाग्यफल : २०७६ साल वैशाख ९ गते सोमबार
मेषः–दिन प्रतिकुल देखिन्छ नयाँ काममा लगानी बढाउनु होला क्षय बढि हुनेछ । खानपानमा ध्यान नदिदा
बैज्ञानिकहरुको अहिले सम्मकै ठुलो सफलता, कृत्रिम मुटु निर्माण गर्न सफल !
इजरायलका वैज्ञानिकहरुले कृत्रिम मुटु निर्माण गर्न सफल भएका छन् । उनिहरुले भर्खरै मात्र त्रिआयामिक थ्रीडी
यस्तो गाउँ जहाँ दाईजोमा सर्प दिइन्छ् !
विवाहमा दाइजोको रुपमा रुपैयाँ, पैसा, गाडी दिनु आम चलन हो । तर, भारतको मध्यप्रदेश बसिआएका
१२ काे परीक्षा शुरु हुने बेला विद्यार्थीको चिट चोर्ने यी तरिका देखेर तपाई चकित हुनुहुनेछ !
विश्वभर नै चलेको चलन मध्ये एक हो परिक्षामा विद्यार्थीले चिट चोर्ने । बढी अंक हासिल